AKHRISO Q-2aad: Warbixin Qiimo Badan Oo BBC Sports Ka Diyaarisay Ciyaaraha Somaliland | Laacib.net
November 23, 2018 Balaleti 6
Qeybtii 1aad: Ma Sahlana In Xul Qaran Loo Sameeyo Dalka Aan La Aqoonsaneyn Ee Somaliland – BBC Sports Oo Warbixin Ka Diyaarisay Ciyaaraha Somaliland
Aasaaseyaasha Akaademigu waxay arkeen awood ku filan oo ay rumaysan yihiin inay leeyihiin da’yarta meesha uu sheeganayo Mo Farah (qoyskiisu ku nool yihiin ee Somaliland) oo haddii fursad la siiyo mustaqbal wanaagsan leh.
“Sagaal iyo sagaashan boqolkiiba ciyaartooyada halkan jooga jidh ahaan way wanaagsan yihiin. Way ordayaan, farsamo ahaana way wanaagsan yihiin, sababtoo ah in badan ayay kubadda ku ciyaareen dariiqyada.
“Waxay ila tahay inaad barbar-dhigi karto in badan oo ciyaartoyga reer Brazil ah. Waxa jooga da’yar badan oo hibo ciyaareed leh, laakiin u baahan tababarid badan oo soo saara tayadooda.”
Koox loo ogolaado inay la ciyaarto dalalka kale xattaa heerka dhallinyaronimo, waxa qayb ka qaadan lahayd dedaalka Somaliland ee in beesha caalamku aqbasho.
“Waxaanu isku dayaynaa inaanu helno aqoonsi, ciyaaraha ayaana ugu wanaagsan.” Sidaas waxa yidhi Adan oo ku daray: “Haddii aan weydiiyo dadka Somaliland ‘waa maxay caasimadda Masar?’ in badan kama jawaabi karayaan. Laakiin haddii aan weydiiyo ‘waa kuma ciyaartoyga ugu wanaagsan Masar?’ waxay si degdeg ah kuugu sheegayaan Salah.
“Kubadda cagtu waa luuqad caalami ah, haddii aanu soo saarno ciyaartooyo wanaagsan, buuq ayay nooga samayn doonaan fagaareyaasha caalamiga ah, taas oo Somaliland genayn karaysa dunida wanaagsan.
“Dadka Somaliland way u samrayaan dalkooda. Haddii ay jiraan kooxo dad ah oo Somaliland ku metelaya fagaareyaasha caalamiga ah, ma noqon doonaan da’yarta oo kaliya, waxay noqonayaan kuwo metalaya qof walba, waxaanan rajaynayaa inay maalin iman doonto, laakiin jid dheer ayaa ka horreeya.” Ayuu yidhi Adan.
Xaqiiqduu ka hdlay wllhi
cabdi najaax says:
hhhhhhhhhh maamul gobaleedka somaliland wuxuu doonaa inuu soo saato ciyaartoy medasho somalia
Viva Somaliland horaa loo soconayaa
Aj caamir saki says:
ALLow dhawro somaliland Xasidkeedan Jabi Viv Horu soco somaliland
Mansha allah ruun ahaanti waxa uu inosheegay waado wangsan oo aan ku ruumayin karno rajada somaliland dhanka citiraka